तिथि मेरो पत्रु » चकमक र अन्य मोबाइल अनुप्रयोग संग डेटिंग लागि सुझाव
जब मिति एक समय थियो, दुई मान्छे व्यक्ति मा प्रत्येक अन्य पूरा गर्न थियो; त्यसपछि अनलाइन डेटिङ आए; र अब अनलाइन डेटिङ एक नयाँ शाखा छ, यो मोबाइल आवेदन माध्यम डेटिङ गर्नुपर्छ.
वर्ष को पछिल्लो केहि यस्तो क्षुधा को एक नम्बर को प्रक्षेपण देखेका छन्; यी अनुप्रयोगहरू को बहुमत बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा तिनीहरूले लागत मुक्त डाउनलोड गर्न सकिन्छ छ.
चकमक शायद सबै भन्दा लोकप्रिय डेटिंग मुक्त अनुप्रयोग छ, जबकि, पनि एकदम व्यापक प्रयोग गरिन्छ कि आफ्नो तरिका को धेरै अरूलाई छन्; उदाहरण काज समावेश, OkCupid, कफी ब्याजेल भेट्छ, माछा को धेरै, र यति मा.
तल चकमक र अन्य मोबाइल अनुप्रयोगहरू संग डेटिंग जब एक हुनुपर्छ भन्ने केहि सुझाव हो.
सही फोटो छान्नुहोस्: तपाईं उपयोग गर्दै छन् डेटिङ अनुप्रयोग को ध्यान बावजूद आफ्नो फोटो लेने चाहिए; एक राम्रो फोटो क्षमता डेटिङ साझेदार को ध्यान हथियाने को एक ठूलो तरिका हो. तथापि, तपाईं चकमक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सही चित्र भएको अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एक फोटो-आधारित अनुप्रयोग जो छ.
चकमक मा, एक मिलान खोजन को आफ्नो अवसरहरुमा आफ्नो प्रोफाइल चित्रहरु मा ज्यादातर निर्भर. एक खराब प्रोफाइल तस्वीर तपाईं मा अधिक रुचि देखाउने देखि आफ्नो भावी म्याच रोक्न सक्छ.
आदर्श, तपाईं चकमक मा अपलोड पहिलो प्रोफाइल तस्वीर आफ्नो अनुहार को एक आकर्षक फोटो हुनुपर्छ, दोस्रो प्रोफाइल तस्वीर आफ्नो कद देखाउनुपर्छ र तेस्रो एक आफ्नो जीवन शैली वा शौक प्रदर्शन गर्न सक्छन्.
तपाईं के गर्नु हुँदैन एउटा कुरा, तपाईं एक महिला छन् विशेष भने, एक बच्चा रूपमा आफैलाई फोटो अपलोड छ; पोस्ट selfies र घटिया टिट-शट पनि टाढा बस्नुपर्छ.
आफ्नो प्रोफाइल विवरण लेखेर गर्दा सावधान हुनुहोस्: तपाईं डेटिङ गम्भीर हुँदा, तपाईं आफैलाई वरिपरि एक रहस्यमय आभा सिर्जना गर्न प्रयास कहिल्यै गर्नुपर्छ.
तपाईं एक डेटिङ अनुप्रयोग प्रयोग तापनि भनेर मनमा राख्नुहोस्, आफ्नो अन्तिम लक्ष्य सामना-गर्न-अनुहार मान्छे को बैठक छ; यति, तपाईं हुनुहुन्न झूट वा कुनै रूपमा आफूलाई चित्रण कुनै बुँदा त्यहाँ.
तपाईं बारेमा सबै कुरा राम्रो छैन भने, तपाईंको बारेमा सबै भन्दा रोचक तथ्य को एक सूची बनाउन र आफ्नो प्रोफाइल विवरण तिनीहरूलाई समावेश. आफ्नो जीवनको सबैभन्दा आकर्षक facades देखाउन नहिचकिचाउनुहोस्, उदाहरणका लागि तपाईं एक रोमाञ्चक काम वा शौक छ भने, विस्तृत यो कुरा.
तपाईं बुद्धि को एक बिट संग मान्छे सधैं अधिक लोकप्रिय छन् पनि एक सानो मजाकिया हुन सक्छ.
सधैं प्रतिक्रिया: तपाईं चकमक मा एक सन्देश प्राप्त गरेका छन् (वा अन्य कुनै पनि मोबाइल डेटिङ अनुप्रयोग तपाईं उपयोग गर्दै), तर सन्देश पठाउन व्यक्ति तपाईं धेरै रोचक प्रकट गर्दैन. त्यस्तो अवस्थामा, बरु एक जवाफ पठाउन अलग, तपाईं अन्य व्यक्ति तपाईं चासो छैन भनेर थाहा दिनु पर्छ.
आफ्नो सन्देशहरू समय सिक्न: यो टिप महिलाहरु को लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ; तथापि, केही परिस्थितिमा, मानिसहरू पनि तिनीहरूले पठाउन सन्देश समयावधिबारे होसियार हुनुपर्छ.
यो एक सप्ताह छ भने, महिला टेक्स्ट होड पछि शुरुवात हुँदैन 10 बजे, तिनीहरूले हुक देख छन् भने मात्र यो काम गर्न सक्नुहुन्छ.
यी सुझाव अहिले चकमक वा संचालन मा कुनै पनि अन्य मोबाइल डेटिङ अनुप्रयोग मा एक सिद्ध खेलमा प्राप्त गर्न मदत आशा. सिर्फ तपाईं कुराहरू पनि धेरै हतार छैन बनाउन; मन पुरानो कहावत राख्न: “ढिलो र स्थिर दौड जितेकी”.